About Tailoress The – Tailoress The
Womenswear PDF sewing patterns are in UK sizes 4-18 (size charts included to help you find your ideal size). Childrenswear PDF sewing patterns in sizes newborn to 14 sano jir ah!
Tailoress ayaa markii hore u abuuray inay u dhaqmaan sida dhibic macluumaad ah dadka raadinaya tolidda macluumaad iyo sidoo kale sida in ay ku biiraan fasalada aan meesha bixiyaan loo isticmaalo. Waxa uu tan iyo markii uu ku koray galay laabadka hannaankii halis ah oo ii bixisaa outlet ah in aynu curiyay aan sii badan oo kaliya aan studio tolidda. Markasta waxaan ka iibin qaab Waan ku faraxsanahay inaan u malaynayaa in sida aan fikrad ayaa noqonaya qof kale iyo sida ay u fasiri laga yaabaa.
Waxaan isku dayaan in ay bixiyaan faahfaahin badan oo sax ah si kasta oo aan nidaamyada iyo Casharrada ay. hannaankii kasta wuxuu leeyahay images midabka buuxa la sharaxaada in lagu lifaaqo CAD barbaro faylasha hannaankii. Lahaanshaha goynta hannaankii ballaadhan loogu bartay iyo buundooyin oo aan iyaga qoreen by gacanta ka badan 10 sano, Waxaan dareemayaa kalsooni ku qaba in awoodda aan dadka kale ku siin hab sahlan in ay iyaga recreating.
Waxaan noqon doonaa faraxsan yahay inuu caawiyo qof kasta oo iibsaday qaab iyo ogaado arrimaha ama dhibaatooyin iyo waxaan ku raaxaysan dhigaayo wax gaar u ah dadka kale haddii la codsado. Sidaas fadlan dareen xuriyad aad igu soo xiriir haddii aad jeclaan laheyd inaad ka hadasho wax!